The da'doodu naaxiyo iyo teknoolajiyada in caawiyo isgaarsiinta meelaha fog ayaa keentay in la billaabay barnaamijyo cusub oo horay ay ahaayeen shisheeye si user caadiga ah. Naftaada Imagine mid ka mid ah ganacsatada oo isticmaalaya hami shirarka software online Cisco ee si ay ula falgalaan mid ka mid ah lagu daydo oo aad xad-dhaaf ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad u qoraan si la mid ah la wadaag saaxiibadaada, laakiin WebEx, ee cajalado bixi aan la si fudud u ciyaaray karin ciyaaryahan kasta oo warbaahinta caadiga ah marka ay soo baxaan in Qaabka ARF.
Sidaa darteed, haddii aad raadinayso qaab ku haboon inuu u ciyaaro aad cajalado WebEx, waxaa inta badan lagu talinayaa in iyaga loogu badalo qaab file MP4 ah, taas oo lagu gaari karaa iyadoo la isticmaalayo converters ka Wondershare. Hoos waxaa ku qoran, waxaan u eegno oo ku saabsan sida aad u bedeli karaan file ARF si aad u MP4.
Part1: Wondershare Video Converter Ultimate iyo tilmaamaha ay
Part2: ARF Free in Converter MP4: Wondershare Video Converter Free
Part3: Aqoonta Extended u qaabab file ARF iyo qaabab MP4
Sida codsi desktop awood badan, Wondershare Video Converter Ultimate ayaa ku guulaystay in uu caawiyo macaamiisha badan oo leh baahida ay diinta ka video. Ku cayaaridda tiro ka mid ah qaabab ayaa hadda noqday fudud sida Wondershare Video Converter Ultimate la Timaadda awoodda files ka baaraandegidda ka qaabab kala duwan iyo bixinta wax soo saarka sida shuruudaha aad. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate, daawashada, wadaagga, iyo riyaaqayaa videos at qalab kasta oo la sameeyo macquul sida users hadda dooran kartaa qaabab kala duwan, halka diinta videos ay.
• Iyadoo soo muuqday Converter ugu dhaqsiyaha badan ee suuqa, waxaa ilbiriqsi ay xafiiltamaan ay xawaare oo ah 30 jeer ka dhakhsi badan codsiyada caadiga ah.
• Dhignaashada ayaa hadda la kordhiyay sida users badalo karaa videos ay gebi ahaanba qaab kasta si ay u tagaan oo ay la qalabka durugsan iyo desktop.
• Iyada oo Wondershare Video Converter Ultimate, users hadda qulquli karaan warbaahinta ay u gal telefishanka iyaga oo aan isticmaalka qalab xira sida USB ama bax ballaaran.
• Iyada oo ah Support DLNA ay jariiradu ka dhisay, waxa ay sidoo kale saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku kaydiso videos HVEC ee size yar oo aan laga badinin ka soo tayada.
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo Your ARF Files galay MP4?
Tallaabooyinka lagu hoos ku qoran:
Talaabada 1: Download Mudanayaasha ka Wondershare website-ka. Click on Double file ka soo dejisan in la bilaabo geedi socodka rakibo. Si aad u hanuuntaan doonaa iyada oo loo marayo hanaanka la rakibo. Sidoo kale, an laga rabo waxay muhiim u tahay diinta ay tani tahay waa in faylasha aad ku badbaadi qaab wmv (waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo ciyaaryahan WebEx).
Talaabada 2: Qaado daqiiqad inaad wax ka barato interface barnaamijka. Waxaad ka heli doontaa in interface waxay bixisaa laba hab oo ay u geliyaan faylka. Arrintan oo uu weheliyo ikhtiyaarka koombiyuutarka caadiga ah, sidoo kale waxaa jira xarunta for 'jiita iyo hoos' u ah kuwa aad u dadaalaya.
Talaabada 3: markii Upload ayaa ku dul size faylka ku xirnaan lahaa. Marka Upload la dhamaystiro, xulo qaab la doonayo wax soo saarka (kiiskan, MP4) ka sanduuqa gacanta midig. Sidoo kale, baran tirada qaabab heli karo.
Talaabada 4: weheliyo qaab beddelidda, xarunta sidoo kale bixisaa iyo qalab tafatirka kuu oggolaadaan in aad ah u bedelo aad file la saamaynta, kala guurka midabka, iyo sida diirada. Qalab tafatirka waa fududahay in la isticmaalo iyo in la shaqeeya karaa qof.
Talaabada 5: Ka dib markii itusi aad badbaadinayo, riix 'badalo' button on geeska gacanta midig ee hoose. Tani bilaabayso beddelidda ee faylkaaga. Ka dib markii ay diinta ka dhamaato, file badbaadi lahaa meel gal.
Wondershare Video Converter Free iyo tilmaamaha ay:
Wondershare Video Converter Free Kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo videos qaab kasta oo xawaare ka wanaagsan. Iyada oo la caddeeyo iyo muuqaalada ku filan, Converter this lagala soo bixi karaa Wondershare fudayd. Habka loo xirxiro waxay tahay si caddaalad ah u fududahay. Sidoo kale, Converter wuxuu la iman doonaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah muuqaalada, jidaynayey isticmaala inay tijaabinayo qaabab video ay.
Waxay bixisaa xawaaraha degdeg ah diinta in El Clasico ka converters badan caadiga ah ee suuqa.
Tayo wanaagsan wax soo saarka files
Button Single YouTube video dajinta doorasho waxaa lagu daray Converter ah
Qalab An tafatirka la interface wax ku ool ah saamaxaya kuwa isticmaala inay sameeyo bedelaad.
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Free si loogu badalo qaab file ARF in MP4
Talaabada 1: Download iyo rakibi Mudanayaasha ka Wondershare website-ka. Guji file ka soo dejisan in la bilaabo geedi socodka rakibo. Si aad u hanuuntaan doonaa iyada oo loo marayo hanaanka la rakibo, oo ka dib markii habka dhamaato, furo suuqa kala barnaamijka. Hubi in lagu badbaadiyo aad duubo qaab wmv isticmaalaya ciyaaryahan WebEx ah.
Talaabada 2aad: Sida aad ka baran suuqa kala barnaamijka, aad dareento in ay jiraan laba siyaabood oo aad u dhex gali kartaa oo aad video. Kuwa dooneysa isticmaali kartaa 'jiita iyo dhibic' habka, halka ikhtiyaarka Upload caadiga ah sidoo kale waxaa la heli karaa.
Talaabada 3: KU XIRAN YAHAY TIRADA faylka, habka Upload ka qaadan lahaa in muddo ah si uu u dhameystiro. Ka dib markii koombiyuutarka waxaa loo sameeyaa, xulo qaab wax soo saarka ee aad jeceshihiin faylka la gediyay, taas oo ay dhacdo in tani ay tahay MP4 ah.
Talaabada 4: weheliyo xarunta qaab beddelidda, waxaa sidoo kale waa ikhtiyaar u sixiddiisa aad file. Interface tafatirka waa fududahay in la fahmo oo u ogolaanaya uga faaidaysan yar in la sameeyo. Waxaad isticmaali kartaa filtarrada, saamaynta, midabka kala guurka iyo wax ka badan.
Talaabada 5: Keydso video ka dib marka aad la sameeyo la-socodka tafatir ah. Raac waxa ay aad riixdo batoonka 'badalo ". Waqtiga lagu qaato u diinta si ay u buuxiyaan korkiisa size faylka ku xirnaan lahaa.
Miiska waxa uu sharaxayaa badan oo ku saabsan qaabab ARF oo file MP4.
file WebEx ah horumarsan duubista
Description ARF u taagan tahay Advanced Rikoodh File. Waa qaab video file ka kooban xogta laga kulan diiwaan online. Tani waa qaab ka mid ah faylka in downloads user ka software WebEx ah.
MP4 waa qaab file weel. Waxay awood u kaydinta of nooc kala duwan ee multimedia oo ay ku jiraan images weli, video, audio iyo subtitles la kaydiyo gudaha file hal.
Fahamka aasaasiga ah ee ARF
Extension ARF File
Isticmaalka Faylal ay la .ARF qaab
A kooban oo ku saabsan WebEx Player iyo hawlihiisa
Taageeridda ARF Files
Waa maxay Qaabka MP4 ah?
Isbarbar Qaabka MP4 ka
Description of MP4 iyo Functions
MP4 File Qaabka faahfaahinta
Doorashada Qaabka MP4 File
25 Top MP4 jaraya / Splitters u Kombiyuutaro iyo Mobile Phones
> Resource > MP4 > Sidee si loogu badalo qaab file ARF in MP4 la Loss Tayada Zero